ရီစရာ Archives - YomaLan
လူ့ပြည်က မော်တော်ပီကယ်နဲ့ တွေ့တော့တာပဲ V crd – စိုင်းနိုင်လင်းထွန်း အောက်ဆုံးတွင် ဗီဒီယိုဖိုင် တင်ပေးထားပါသည်။
ဂရင်းနစ် မှတ်တမ်းဝင် လူထူးလူဆန်းကြီးများ
April 13, 2018 April 13, 2018 Yoma Lan0 comment
Garry Turner ဆိုတာ ယူကေနိုင်ငံက အမျိုးသားဖြစ်ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ အရေပြားတွေဟာ အများနဲ့ မတူပဲ ဆွဲ့ဆန့်လို့ ရတာဖြစ်ပါတယ်။အရေပြားကို ဆွဲပြီးတိုင်းတာမယ်ဆိုရင် 15.8 cm ရှိတာဖြစ်ပြီး သူဟာ ရောဂါတခုကြောင့် အရေပြားတွဲကျနေတာဖြစ်ပါတယ်။1999 ခုနှစ်မှာတော့ သူဟာ ဂရင်းနစ် စံချိန်ဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ Simon Elmore ဆိုတာ ယူကေနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီး သူဟာ အရာဝတ္ထုတော်တော်များများကို ပါးစပ်ထဲထည့်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ပိုက်ပေါင်း 400 လောက်ကို စည်းပြီး ပါးစပ်ထဲ ထိုးထည့်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ Ram Singh Chauhan ဆိုတာ အိန္ဒိယနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီး သူဟာ ကမ္ဘာ့မုတ်ဆိတ်အရှည်ဆုံး လူသားဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ မုတ်ဆိတ်ကတော့ 4.29 မီတာ ရှည်ပြီး “Lo Show Dei Record” ဖြစ်တဲ့ တီဗီရှိုးတခုက မေးရာကနေ ဂရင်းနစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Ekkachai Tiranarat နဲ့ Laksana Tiranarat ဆိုတဲ့ စုံတွဲကတော့ ရှာမှ ရှားဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာ ကမ္ဘာ့အကြာဆုံး နမ်းနိုင်သူတွေဖြစ်ပြီး နှုတ်ခမ်းချင်းစုပ်ယူတဲ့ နမ်းနည်းကို 58 နာရီ 35 မိနစ်နဲ့ 58 စက္ကန့်ကြာ နမ်းနိုင်တာဖြစ်ပြီး 2013 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ 12 ရက်နေ 14 ရက် နေ့ထိပြိုင်ပွဲမှာပထမရခဲ့ပါတယ်။ Kim Goodman ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးလောက် မျက်လုံးပြူးသူ မရှိဘူးလို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။သူဟာ…
ယောက်မဆီကစာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူကိုဖတ်ပြတာ ငါးပါးမှောက်ရောပေါ့
” ကိုသာအေး ” ” ဟေ …!! ဘာလဲ မိန်းမ ? ” ” ရွာက ရှင့်ညီမဆီက စာလာတယ် ” ” ဟာ .. ပြဿနာပဲ။ ငါ့မျက်မှန်ကွဲနေတာ မှန်အသစ်မလဲရသေးဘူး။ ဒီလိုလုပ်ကွာ .. မင်းငါ့ကို ဖတ်ပြ ” ” မဖြစ်နိုင်ပါဘူးတော်။ ရှင့်ညီမက စာရေးရင် တောင်တစ်လုံးမြောက်တစ်လုံး။ ကျွန်မကလည်း သူငယ်တန်းစာတောင် နှာနှပ်သင်ထားရတာ ” ” ငါက မြို့ထဲသွားမှ မျက်မှန်ဝယ်ရမှာ။ ရပါတယ်ကွာ။ အဆင်ပြေအောင် နားထောင်ရမှာပေါ့ ” ” ရှင် ဖတ်ပြဆိုလို့ ဖတ်ပြမှာနော်။ ပြီးတော့မှ အရင်တစ်ခါတုန်းကလို ကျွန်မကို မကန်နဲ့ ” ” အေးပါကွာ။ ဖတ်မှာသာဖတ်စမ်းပါ ” ” ပြီးရော။ အဟမ်းးး .. ဖတ်ပြီ။ သို့ .. ခိုကြီး နေကောင်းလား ” ” ကိုကြီး နေကောင်းလား။ ဟုတ်ပီ ဆက်ဖတ် ” ” ဗုန်းကြီးလဲ ခိုကြီးကိုမျှော်နေတယ် ” ” ဘုန်းကြီးလဲ ကိုကြီးကိုမျှော်နေတယ် ” ” အပျိုကြီးလာတုန်းက သူ့ခြင်ထောင်ထဲကို သခွါးသီးတွေ ထည့်ပေးလိုက်တယ်။ ဖာကောင်းမရှိလို့ ” ” ဟမ် ..…
ကမ္ဘာကော်ျကာတွန်းဇာတ်ကားတွေမှာ မြင်ရတဲ့ ဟာသအလွဲလေးများ
ကာတွန်းဆိုတာကတော့ အပြင်လက်တွေ့ဘ၀နဲ့မတူပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီအလွဲလေးတွေကတော့ လူကို အကြောင်ရိုက်ပြီး ခေါင်းကုတ်သွားစေတယ်။ ဒီအလွဲလေးတွေက ကာတွန်းဇာတ်ကားတွေကို ကြည့်နေရင်း သတိမထားမိလိုက်တဲ့ အလွဲလေးတွေပါ။ ကြည့်ရင်း တွေးကြည့်ရင်းနဲ့ ရယ်နေရမှာပါ။ ရှုစားကြည့်ကြပါအုံးနော်။ (၁) Tom And Jerry ပုံမှန်အချိန်တော့ အင်္ကျီမပါဘဲ ရေကူးတော့မယ်ဆိုမှ အင်္ကျီတွေနဲ့တွေ့ရတဲ့ Tom And Jerry ကာတွန်း။ (၂) Arthur သီချင်းနားထောင်နေတာ နားကြပ်က ဘာလို့နားမှာ မတပ်ထားရတာလဲ။ (၃) SpongeBob SquarePants နားကြပ်ကို မျက်လုံးမှာ တပ်ပြီး သီချင်းနားထောင်နေသောအခါ ။ (၄) The Powerpuff Girls Powerpuff Girls လေးတွေက တူကို လက်ချောင်းတွေမပါဘဲ ကိုင်တတ်တယ်။ (၅) Donald Duck ပုံမှန်အချိန်တော့ အောက်ပိုင်းမပါဘဲ လျှောက်သွားနေပြီး အင်္ကျီချွတ်လိုက်တော့မှ အောက်ပိုင်းကို လာကွယ်နေတယ်။ (၆) Donald Duck And Family ဘဲက ဘဲကင်စားနေသောအခါ ။ (၇) Minnie Mouse Minnie Mouse က ကြွက်ကို ပြန်ကြောက်နေတာ။ (၈) Courage the Cowardly Dog လက်တွေထက် လက်ထိပ်က ပိုကြီးနေသောအခါ ။ (၉) The Three Little…
Troller တွေရဲ့ကျီစယ်ခြင်းခံထားရတဲ့ ပတ်ထရစ်ရှာရဲ့ ပုံများ
Reflection ရုပ်​ရှင်​ဇာတ်ကားကြီးရဲ့ ဧပြီလ (၅) ရက်နေ့၊ သမ္မတ ရုပ်ရှင်ရုံ၊ ရန်ကုန် မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ “Red Carpet Gala Show” ကြီးမှာ ၀တ်ဆင်ခဲ့တဲ့ ပတ်ထရစ်ရှာရဲ့ ဖက်ရှင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပရိသတ်တွေအများစုကလဲ ဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့သလို Trollerတွေရဲ့ နောက်ပြောင်ကျီစယ် ခြင်းကိုလဲ ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လဲ သူမကတော့ troll ခံထားရတဲ့ သူမရဲ့ ပုံတွေကို ကြည့်ပြီး အူတက် အောင် ရီရပါတယ်ဆိုကာ troller တွေကို သူမရဲ့ ပေ့ခ်ျမှာ စာတစ်ချို့ ရေးသားကာ ချစ်စရာကောင်းစွာတုန့်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ သူမအူတက်လောက်အောင် ရီရပါတယ်ဆိုတဲ့ ပုံလေးတွေကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ချစ်ရပါသောချစ်ပရိသတ်ကြီး ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။ ချစ်ဖို့ကောင်းရင် မျှဝေသွားကြပါဦးနော် Source – Swan Htet‎ fb
ဖင်ပြားတာကောင်းလား ဖင်ကြီး တာကောင်းလား “ဒါက ဒီလိုရှိတယ်”
April 11, 2018 Wai Yan Phyo0 comment
တကယ် တော့ ဖင် ပြားတာဟာ ည လေးတို့တွက် မ ကောင်းပါဘူးဘာ ကြောင့် လည်းဆို တော့ ကွီး ပြောပြမ ဖင် ပြားရင် Like ကမရLike မရ တော့ စိတ် ကမကြည်စိတ် မကြည် တော့ ရန် တွေဖြစ်မနိုင် တော့ ဖင် တု ပြေးဝယ်ဖင် တုနဲ့ ဓာတ် ပုံရိုက်မရိုက် တတ် တော့ အတုမှန်းသိသာလူတကာ ကဲ့ရဲ့ခံရ စိတ် ဓာတ် တွေကျပြီး ဖေ့ဘုတ် မသုံး တော့ဖေ့ဘုတ် မသုံး တော့ လင် ကမရအပျိုကြီးဖြစ် .. ပိုပြီး ဒေါသထွက် လာဒေါသ ကြောင့်ရောဂါရဆေးရုံတက် .. ရောဂါကုပိုက် ဆံကုန် .. သူ တောင်းစားဖြစ်အစာနပ် မမှန် တော့ လူကပိန် ချုံးဝဲ တွေစွဲ .. အသက် ကလည်းကြီးလာနောက် ဆုံး ဘိုးဘွားရိပ် သာ ရောက် .. ဂေါက် ! ကဲ .. မ ပြောဘူးလား ဖင် ပြားတာည လေးတို့အတွက် အန္တရာယ် ရှိတယ်ဒါ ပေမဲ့ ဖင်…
April 5, 2018 Wai Yan Phyo0 comment
“​အေးကြည်​မ ​ရော့ ” “ဟဲ့ အဲဒါဘာတုန်း ” “ရည်းစားစာ ” “​ဗု​ဒ္ဓေါ ” ​အေးကြည်​မက အံ့ဩလွန်းလို့ရင်​ဘတ်​ကိုဖိထားရတယ်​ငြိမ်း​မောင်​က​တော့ ခပ်​တည်​တည်​ပဲ “ယူ​လေ ” “အိ မယူပါဘူး ” “အင့်​ဟာ ယူ ” ငြိမ်း​မောင်​က စာကိုအေးကြည်​မလက်​ထဲထိုး​​ပေးပြီးပြန်​သွား​ရော ​အေးကြည်​မတစ်​​ယောက်​လမ်း​ပေါ်မတ်​တပ်​ရပ်​ပြီး ဘာလုပ်​ရမှန်းမသိ ငူတူတူကြီးကျန်​​နေခဲ့​​ရောသိလည်း သိချင်​​သေး၍ စာကိုဖွင့်​ကြည့်​လိုက်​​လေ​တော့ “ကျစ်​ ငြိမ်း​မောင်​​တော့ငါ့ကို ပညာပြသွားပြီ ” ​ရေးထားသည်​က အင်္ဂလိပ်​စာများဖြစ်​သည်​ သူမလည်း မဖတ်​တတ်​ မဖတ်​တတ်​၍ ပိုသိချင်​လာသဖြင့်​ အိမ်​​ရောက်​မှတူဖြစ်​သူအားဖတ်​ခိုင်းမည်​ဟုကြံကာ အိမ်​ပြန်​လာခဲ့​ တော့သည်​ “တူ​လေး ဒါ​လေးဖတ်​​ပြ ” “​ဘာ​လေးလဲ ” တူ​တော်​​မောင်​က ​အေးကြည်​မလက်​ထဲမှစာအားဆွဲယူလိုက်​ပြီးဖွင့်​ကြည့်​လိုက်​သည်​ ပြီး​နောက်​ “မုန့်​ဖိုး​ပေးမှ ဖတ်​ပြမယ်​ ” “​အေးပါဟယ်​ နှစ်​ရာ ​ပေးမယ်​ ” “မရဘူး တစ်​​ထောင်​​ပေးရမယ်​ ” “​ဟော ” “မ​ပေးလည်းရတယ်​​နော်​ မဖတ်​ဘူး ” “​ပေးမှာပါဟာ ဖတ်​ပြ​နော်​ ” “ပြီး​ရော ” ငတိက စာရွက်​ကိုဖွင့်​ကာ ကြည့်​ပြီးပြုံးလိုက်​​သေးသည်​အမှန်​​တော့ သူလည်း​သေ​သေချာချာမသိ ရှစ်​တန်းနှစ်​ခါ ကျထားသူဖြစ်​၏ “ယူအာမိုင်​ စကိုင်း ” “You are my sky ” “အဲဒါ ဘာလဲဟဲ့ ” “နင့်​ဖက်​က စပြီး ကိုင်း​ပေးပါ ” “ဟဲ့ ဘယ်​လိုတုန်းဟ…
မြန်မာပြည်အလည်ပိုင်းမှာ တည်ရှိတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ
March 31, 2018 Yar Zar Ko Ko0 comment
တရားပွဲသွား တရားနာရင် ဘာဖြစ်မလဲ ။ လူသတ်ချင်ပါတယ် ချာမ ။ ဟဲ့ ပလုတ်တုတ်..။ ဆရာမ ။ ။ ကဲ ပထမဆုံးမေးခွန်းမေးမယ် တရားပွဲသွား တရားနာရင် ဘာဖြစ်မလဲ ။ ကလေးများ ။ ။ လူသတ်ချင်ပါတယ် ချာမ ဆရာမ ။ ။ ဟဲ့ ပလုတ်တုတ် ဘယ့်နှဲ့ လူသတ်ချင်တာတုန်း ကလေးများ ။ ။ ဟုတ်ပါတယ်ချာမ တနေ့က တားတားဖေကြီး ဟိုဘုန်းကြီးတရားနာရင်းနဲ့ ဒေါသတွေထွက်လာပြီးလူသတ်ချင်တယ်လို့ ပြောပါတယ် ချာမ ဆရာမ ။ ။ ဟယ် မဟုတ်တာ နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ် လုပ်ပါကွဲ့ .. ကဲကဲ အာ့ဆို နောက်တစ်ခုဖြေ တရုတ်နိုင်ငံက ဆရာမတို့နိုင်ငံရဲ့ ဘယ်ဘက်မှာရှိသလဲကွဲ့ ကလေးများ ။ ။ အလယ်ပိုင်းမှာပါ ချာမ ဆရာမ ။ ။ ဘယ်ကအလယ်ပိုင်းရမှာလဲ အရှေ့ဖက်မှာပါကွဲ့ ကလေးများ ။ ။ ဟာဂျာ ချာမကလဲ မန်းရေးက တားတို့နိုင်ငံအလယ်ပိုင်းဟုတ်ဘူးလားလို့ ဆရာမ ။ ။ ဟင် !! ကဲပါ နောက်တစ်ခုဖြေ .. ယိုးဒယားကိုသွားသိမ်းခဲ့တာ ဘယ်သူတွေလဲကွဲ့ ကလေးများ ။ ။ မြန်မာအိမ်ဖော်တွေပါ ချာမ ဆရာမ ။ ။ ဟဲ့…
အမျိုးသမီးများ အိမ်ထောင် ဖက်အဖြစ် အရက်သမားအားရွေးချယ်သင့်
၁ ။ မူးနေသည့် အချိန်များတွင် မိမိမလှသော်ငြားလည်း သူတို့အမြင် တွင် အရမ်းလှသည်ဟု ထင်မြင်နေတတ်ခြင်း – ၂ ။ ည နေတိုင်း အရက်ဆိုင် တွင် အရှိများသဖြင့် ည နေစာကိုအမြဲတစ်ယောက်စာ လျှော့ချက် ရခြင်း – ၃ ။ ဆေးသမား ဖဲသမား မဟုတ်သည့်အတွက် အရက်ဖိုးလေးမဆိုစ လောက်မျှသာကုန်ခြင်း – ၄ ။ ကိစ္စရှိလို့ အ ရေးတကြီး လိုအပ်လျှင် အရက်ဆိုင် တွင် အလွယ် တကူ သွားရောက် ခေါ်နိုင်ခြင်း – ၅ ။ အိမ် ရှင်မများအ နေဖြင့် အိမ်၏စီးပွားရေးအား ကိုယ်တိုင် ဦးစီးအုပ်ချုပ် လုပ်ကိုင်နိုင်ပြီး တစ်အိမ်လုံး၏ ဝင်ငွေ ထွက်ငွေ ကို မိမိစိတ်တိုင်းကျ စီမံခန့်ခွဲ သုံးစွဲနိုင်ခြင်း – ၆ ။ ထွေလီဖောက်ပြား ဖောက်ပြန် လုပ်ဖို့မ ပြောနဲ့ မူးပြီး အိမ်ပြန်တာတောင် သူ့ဖာသာ အနိုင်နိုင် မနဲလမ်းလျှောက် ပြန်လာရခြင်း – ၇ ။ သူတစ်ပါးအသက် သတ်ဖို့နေ နေသာသာ သူ့ဖာသာ အန်ဖတ်ဆို့ မ သေ အောင် မနဲဂရုစိုက်နေရခြင်း – ၈ ။ တစ်ပါးသူ ပစ္စည်းခိုးဖို့ မ…
မင်္ဂလာဦးညပြီးတော့ နောက်တစ်နေ့မှာ လူငယ်ဇနီးမောင်နုံ၂ယောက် ဆေးခန်းသို့ အရေးပေါ်ရာက်သွားပါသည်…။ ဆရာဝန် – ဘာဖြစ်တာလဲဗျ ယောင်္ကျား – ဆရာ ကျွန်တော့်အမျိုးသမီးက ကိုယ်ဝန်တားဆေး အလုံး ၂၀ လောက်သောက်မိသွားတယ်ဗျ…တစ်ခုခုဖြစ်မှာစိုးလို့လာပြတာပါ… ဆရာဝန် – ဟေ…. ဘယ်လိုဖြစ်လို့ အလုံး ၂၀ တောင်သောက်ရတာလဲ မိန်းမ – ဗူးပေါ်မှာ (one time – 1 tablet) တစ်ကြိမ်ကို တစ်လုံး သောက်ပါလို့ ရေးထားလို့ပါဆရာ… ငွင်……………ဆရာဝန်ခများ အံ့သြမျင်သက် ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်သွားရှာသည်..။ 😅😅😅 တစ်ခါတစ်လေကြတော့ စာဖတ်တတ်ပြီးမတွေးတတ်ကြသလို… တစ်ချို့တစ်လေကြတော့လည်း စာဖတ်ပြီးအတွေးလွန်တတ်ကြတယ်..။ မိတ်ဆွေကော ဒီစာကလေးဖတ်ပြီး ဘာတွေတွေးနေသလဲဗျ 🤔😂 အတွေးမလွန်နဲ့နော်…ဆေးပညာရှုထောင့်မှတွေးရန် ref: Wechat Translated by #O’ Chu မင်ျဂလာဦးညပွီးတော့ နောကျတဈနမှေ့ာ လူငယျဇနီးမောငျနုံ၂ယောကျ ဆေးခနျးသို့ အရေးပျေါရာကျသှားပါသညျ…။ ဆရာဝနျ – ဘာဖွဈတာလဲဗြ ယောင်ျကြား – ဆရာ ကြှနျတျော့အမြိုးသမီးက ကိုယျဝနျတားဆေး အလုံး ၂၀ လောကျသောကျမိသှားတယျဗြ…တဈခုခုဖွဈမှာစိုးလို့လာပွတာပါ… ဆရာဝနျ – ဟေ…. ဘယျလိုဖွဈလို့ အလုံး ၂၀ တောငျသောကျရတာလဲ မိနျးမ – ဗူးပျေါမှာ (one time – 1 tablet) တဈကွိမျကို တဈလုံး သောကျပါလို့ ရေးထားလို့ပါဆရာ… ငှငျ……………ဆရာဝနျခမြား…